तिथि मेरो पत्रु » Yappily कहिल्यै पछि: के तपाईं 'मिश्रित परिवार' लागि तयार हुनुहुन्छ?
द्वारा एन छोड
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 26 2020 |3मिनेट पढ्न
तपाईं सँगी पाल्तु जनावर प्रेमी डेटिङ शुरू गर्नुभएको छ भने, तपाईं पहिले देखि नै साधारण मा महत्त्वपूर्ण कुरा छ: जनावरहरु को लागि आफ्नो प्रेम. जनावर आफ्नो परिवार को भाग हो. तपाईं शायद तपाईं महसुस र आफ्नो जान्छन् प्याकेज सम्झौता हो; आफ्नो तारीख आफ्नो घरपालुवा जनावरको संग प्राप्त गर्न सक्दैन भने, यो अरू ठाउँमा हेर्न समय हो.
आफ्नो घरपालुवा जनावरको सधैं पहिलो आएका छन् भने, तपाईं आफ्नो जीवन मा एक नयाँ प्रेम सम्बन्ध एकीकृत कसरि? आफ्नो तारीख आफ्नो घरपालुवा जनावरको भेट गर्नुभएको छ? एकल आमाबाबुले जस्तै, केही पाल्तु जनावर मालिक सम्बन्ध पूरा गर्न घर आफ्नो प्रेम चासो ल्याउन अघि जान्छ कसरी हेर्न प्रतीक्षा “यो घरपालुवा जनावरको।” आफ्नो तारीख आफ्नो पाल्तु जनावर संग पारस्परिक बाटो जस्तै तपाईं के? आफ्नो नयाँ मित्र आफ्नो पाल्तु जनावर चिन्न प्रयास गर्छ? म एक सुगा भएका मानिस सुनेका, र उहाँले आफ्नो चरा मा आफ्नो नयाँ प्रेमिका स्वीकार मदत चरालाई behaviorist खोजे आफ्नो “झुम्मिएर।” समय, प्रयास, र आफ्नो चरा मा निवेश प्रेमिका उहाँलाई यो स्त्री थियो विश्वस्त कुराहरू एक थियो मन “एक।” तिनीहरूले विवाह, र चरा खुसी थियो.
आफ्नो मिति जनावर संग महान साथ प्राप्त गर्छ, तर एक थोत्रा ​​कुकुर खेलौना जस्तै व्यवहार? म पशुहरूको प्रेम विश्वास तापनि प्रेम को क्षमता एक राम्रो संकेत हो, कहिलेकाहीं एक साथी महसुस हुन सक्छ “दोस्रो-वर्ग” दशकको अन्य जान्छन् गर्न. यो यहाँ सन्तुलन छ महत्त्वपूर्ण. म एक पटक आफ्नो कुकुर मा कोमल स्नेह र upscale डेली व्यवहार lavished मानिस थाह, तर मौखिक र शारीरिक आफ्नै प्रेमिका दुरुपयोग.
के तपाईं कहिल्यै साथी र घरपालुवा बीच चयन गर्न आग्रह गरिएको छ? जवाफ पाल्तु जनावर राख्न सामान्यतया छ, र साथी जाऔं. एक प्रकारको, साथी मायालु तपाईं त्यस्तो अल्टीमेटम दिन संकोच थियो. (आफ्नो साथी गंभीर एलर्जी वा आफ्नो पाल्तु को एक रोग डर छ भने, यी विषयहरू अक्सर व्यावसायिक मदतले समाधान गर्न सकिन्छ, दुवै साझेदार इच्छुक छन् भने।) प्राय तपाईं माग चयन गर्ने मान्छे असुरक्षित र नियन्त्रणमा छन्, र खडा हुन सक्दैन “साझा” घरपालुवा संग तपाईं. तिनीहरूले आफ्नो भावना विचार छैन; केवल आफ्नै. यसबाहेक, तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर अलविदा भन्न गरे पनि भने, आफ्नो साथी संभावना अन्य कुराहरू डाह प्राप्त हुनेछ: साथी वा परिवारका साथ आफ्नो समय, आफ्नो workouts, सोख, पनि संभवतः आफ्नो काम. तपाईं यस्तो छनौट गर्न आग्रह छौं भने सावधान.
तपाईं को दुई लागि प्रश्नहरू:
– तपाईं जनावरहरू आफ्नो पारस्परिक प्रेम देखि अलग सम्बन्ध धान्न पर्याप्त छ?
– आफ्नो घरपालुवा जनावरको प्रत्येक अन्य मिलेर कसरी? तपाईं को के एक बिरालोहरु छ, अन्य चरा? तपाईं जस्तो देखिने असंगत जाते क्षमता खतराको समाधान गर्न सक्छ?
– तपाईं को दुई आफ्नो घरपालुवा जनावरको बारेमा विभिन्न विचार छ’ जीवनशैली? उदाहरणका लागि, उहाँले आफ्नो बिल्ली महसुस गर्नुहुन्छ भित्र रहन र ओछ्यानमा उहाँलाई सुत्न गर्नुपर्छ, तर त्यो दृढता बिरालोहरु बाहिर हौं भनी विश्वास? त्यो चरा छ र अडिग भने यो जैविक veggies र पूर्ण-स्पेक्ट्रम प्रकाश प्राप्त, उहाँले यो पैसा को एक overindulgent फोहोर विचार गर्छ? उहाँले ड्राइव जब भने उहाँसित आफ्नो कुकुर लिन्छ, त्यो उनको कान मा कुकुर सास मन नपराउने गर्छ?
– तल बस र आफ्नो चिन्ता बारेमा प्रत्येक अन्य कुरा. यो जोखिमपूर्ण महसुस हुन सक्छ, तर यो ढिलो होस् पछि भन्दा यस गर्न राम्रो छ, र तपाईं छलफल समयमा आफ्नो मिति महत्त्वपूर्ण पत्ता लगाउन सक्छ: उसले सम्भावित टाँसिएको प्रजालाई copes कसरी. धारणा मतभेद समाधान गर्न सक्ने क्षमता स्थायी सम्बन्ध राम्रो सूचक हो.
तपाईं दुवै पाल्तु जनावर प्रेमीहरूले हुनुहुन्छ भने, तपाईं पहिले नै राम्रो सुरुआत गर्न बन्द हुनुहुन्छ. संचार को लाइनहरु खुला राख्न र समय प्रत्येक अन्य आनंद (संग र आफ्नो पाल्तु जनावर र बिना). को चल्छ हिंड्न समय लाग्न, को Smells sniff, र छाल, म्याउ, squawk, र आफ्नो हृदयलाई चीची गर्नु’ सामग्री!